Ithegi: iqonga lokudibana | Martech Zone
Ithegi: iqonga lokudibana
NgoLwesine, Septemba 24, 2020 NgoLwesithathu, nge-13 kaJanuwari 2021 Douglas Karr
Umhlaba wethu yidijithali kwaye ngakumbi kobo budlelwane kunye nokuzibandakanya kuyenzeka kwi-Intanethi kunangaphambili. Nkqu neenkampani zemveli zihambisa intengiso yazo, inkonzo, kunye nokuzibandakanya kwi-intanethi… yinto eqhelekileyo yesiqhelo ukusukela kubhubhane kunye nokukhiya. Ukuthengisa ngamazwi ngomlomo yinto ebaluleke kakhulu kwishishini ngalinye. Ngokwesiko lesiNtu, olo dluliselo lunokungasebenzi kakuhle… kudluliswa inombolo yomnxeba okanye idilesi ye-imeyile yomlingane kunye nokulinda ifowuni ukuba ikhale.
Radius yempembelelo: Iqabane, ukudibana, iMedia kunye noLawulo lweeTag
NgoMvulo, Julayi 21, 2014 Douglas Karr
I-Radius yempembelelo yenza ukuba iimveliso zedijithali kunye neearhente zikhulise ukubuya kwenkcitho yentengiso kuwo onke amajelo edijithali, ashukumayo naowaxhunyiwe kwi-intanethi. Itekhnoloji yabo yokuthengisa ye-SaaS yenza ukuba abathengisi babe nembono eyodwa yohlalutyo kuyo yonke imizamo yentengiso ngokuqokelela idatha yohambo lwabathengi kunye neendleko zokuthengisa. I-Impact Radius Suite yeeMveliso ibandakanya uMphathi weQabane- yenza i-affiliate yakho kunye neenkqubo zokusebenzisana namaqabane. Ukunciphisa intlawulo yokuthengiselana kunye nokunyusa i-ROI ngelixa uphucula isikali, ukuqonda kohlalutyo, kunye